‘कता गयौ गीत गाउने गाइने दाइ ? दुःखपीर विरहमा चाहिने दाइ !’
कता गयौ गीत गाउने गाइने दाइ ?
दुःखपीर विरहमा चाहिने दाइ !
कुनै बेला दुःखपीडाका गीत गाउँदै हिँड्ने गाइने दाइ हिजोआज जहाँतहीँ भेटिँदैनन् । पछिल्लो समय सारङ्गी बजाउने पेशा लोप हुँदै जान थालेको छ ।
युवाले सारङ्गी बजाउने पेशा नअपनाउँदा सारङ्गी बजाउने पेशा लोप हुन थालेको हो ।
एक समय थियो । न रेडियोको पहँुच थियो, न त टेलिभिजन नै । त्यतिबेला कतै घटना, दुर्घटना भए त्यसलाई बयान गरेर गाइने दाइले गीत गाउँथे ।
विभिन्न गाउँमा पुगेर देश विदेशमा भएका घटना दुर्घटनाका खबर दिन्थे । लाहुरे दाइले बेहोरेका दुःख कष्टलाई गाथा बनाएर सुनाउँथे ।
बाटो हिँड्दै गरेको गन्धर्वलाई घरघरमा बोलाएर गीत गाउन लगाइन्थ्यो । मन खोलेर गन्धर्वलाई दान, दक्षिणा र सिदा दिइन्थ्यो । तर अहिले न गन्धर्व सारङ्गी गाउँधरमा भिरेर गाउँ–गाउँमा पुग्छन्न् त न युद्धगाथा, कर्खा र घटनाबारे वर्णन गर्छन् । कुनै जमना गन्धर्व जातिका व्यक्तिलाई गाइने दाइ भनेर चिनिन्थ्यो । अहिले समय फेरिएको छ । उनीहरु आफंैलाई गाइने भन्न मन पराउँदैनन् ।
अर्कोतर्फ घरघरमा गएर गीत सुनाउने गाइनेलाई सम्मान होइन, हेय गरिन्छ । उनीहरूलाई सम्मान दिइँदैन । म लाग्ने जस्तो व्यवहार गरिन्छ । पहिलेका बुढापाखाले केही रुपमा राम्रो व्यवहार गर्ने भएपनि नयाँ पुस्ताले आफूहरूलाई हेय गर्ने गरेको लामो समयदेखि सारङ्गी बजाउँदै आएका धर्मलाल गन्धर्वले बताए ।
सारङ्गी बजाउनेलाई समाजले पनि हियाउने भएकाले सारङ्गी बजाउनेको संख्या घट्दै गएको उनले बताए । ‘पहिले–पहिले सारङ्गी बजाउनेलाई सम्मान हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले हियाउँछन्, त्यसैले पनि घरघरमा गएर सारङ्गी बजाउने पेशा लोप हुँदै गएको छ ।’
पहिले आफ्नो परिश्रमअनुसार दक्षिणा दिने गर्ने भएपनि अहिले त्यो संस्कारको अन्त्य भएको उनले बताए ।
तुलसीपुर–४ रक्षाचौरका अजय गन्धर्व १७ वर्षको भए । उनले जन्मेदेखि नै सारङ्गी कहिल्यै बजाएनन् । सोही ठाउँका ३४ वर्षीय फोजबहादुर गन्धर्वले पनि कहिल्यै सारङ्गी बजाएनन् । कारण हो – सारङ्गी बजाउने बित्तिकै समाजले हेर्ने दृष्टिकोण । सारङ्गी बजाउनेलाई समाजमा गाइने भनेर हेप्ने प्रवृत्ति भएकाले आफूले सारङ्गी बजाउने पेशा नगरेको बताए ।
गन्धर्व समुदायका युवानै सारङ्गी बजाउने पेशाप्रति आकर्षित नहुँदा पेशा नै लोप हुने अवस्थामा छ । गन्धर्व समुदायको परम्परागत पेशा नै संकटमा पर्न थालेको छ । नेपाली संस्कृतिको महत्व र वीरताको गाथा बोेकेको सारङ्गी बाजालाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भएपनि राज्यले पनि संरक्षणमा ध्यान नदिएको गन्धर्व समुदायका अगुवा सुनिल गन्धर्वले बताए ।
अहिले तुलसीपुरको गणेशपुरमा २५० घर गन्धर्व समुदायको बसोवास छ तर ४/५ जनाले मात्रै अहिले सारङ्गी बजाउँछन्, त्यो पनि कहिलेकाहीँ । गन्धर्व जातिको सारङ्गी बजाउने पेशा संरक्षण गर्न राज्यले उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने गन्धर्व अगुवा सुनिलले बताए ।
सारङ्गीको संरक्षणका लागि सारङ्गी संग्रहालय निर्माण गर्नुपर्ने बताए । दाङमा करीब ९०० गन्धर्व समुदायको बसोबास छ । – दीपक बोहोरा/रासस
गायक सुमित खड्काको दशैं गीत सार्वजनिक
एलिना चौहान र अन्जान सूर्यको स्वरमा ‘नजाऊ नभन ...’...
भुवन प्यासीको ‘यसपालिको दशैंतिहार’ सार्वजनिक
विष्णु गैरेले ल्याए दशैंको मर्मस्पर्शी गीत [हेर्नुहोस्...
बेस्सरी टाउको दुख्छ ? यस्तो समस्या हुनसक्छ
मौसम परिवर्तन हुँदा किन बिरामी भइन्छ
कस्तो अवस्थामा बढ्छ कोलेस्ट्रोल
अनेकौं रोगबाट अंगुरले जोगाउँछ
यी सामान्य उपाय अपनाए डाक्टर कहाँ धाइरहनु पर्दैन..
दशैंमा एनआईसी एशिया बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट दक्षिणा दिँदा १० प्रतिशत थप पाइने
निशान म्यागनाइट एसयूभी अब नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
विश्वभर कति पुगे कोरोना भाइरस संक्रमित ?
कोरोना निको हुने देशको सूचीमा भारत अग्रस्थानमा, कुन देशको अवस्था कस्तो ?